Abiy Axmed: ‘Howlgalka milateri wuu sii socon doonaa tan iyo inta hub ka dhis lagu sameynayo kooxaha hubeysan | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Abiy Axmed: ‘Howlgalka milateri wuu sii socon doonaa tan iyo inta hub...
Abiy Axmed: ‘Howlgalka milateri wuu sii socon doonaa tan iyo inta hub ka dhis lagu sameynayo kooxaha hubeysan
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed wuxuu sheegay in howlgalka militeri ee ka dhanka ah Tigray loo fulinayo qaabkii loo qorsheeyay.
Wuxuu intaas ku daray in howlgalka la joojin doonto tan iyo inta hub ka dhigis lagu sameynayo kooxaha abaabulan ee dambiilayaasha ah.
Waxaa howlgalka la joojin doonaa “Kaddib marka hub ka dhigis lagu sameeyo kooxaha abaabulan ee dambiilayaasha ah, inta dowlad sharci ah gobolka looga soo celinayo isla markaana dambiilayaasha baxsadka ah caddaallada la hor keenayo”
Ra’iisul Wasaare Abiy ayaa dhawaan ku dhawaaqay in tallaabo militeri laga qaado Tigray kaddib markii uu ku eedeeyay ciidamada gpbolka inay weerar ku qaadeen saldhig militeri oo ku yaalla gobolka kuwaas oo ay ku sugnaayeen ciidamada federaalka.
Previous articleMadaxii Falastiin u qaabilsanaa wahadallada Israa’iil oo u geeriyooday cudurka Covid-19
Next articleDagaal 10 Qof ku dhinteen in ka badan 10 Qof oo ka dhacay Galmudug
Madaxweyne Farmaajo oo maanta Cabsi darteed uga baaqday Xafladii Tiyaatarka...
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta ka baaqday xaflad lagu qabtay Tiyaatarka Qaranka, taasoo loogu mahadcelinayay dadkii soo diyaariyay Manhajka waxbarashada Soomaaliya. Ciidanka ilaalada...
Wasaarada Arimaha Gudaha oo soo shaweysay Doorashadii halka Dhinac...